6-da barnaamij ee jadwalka caadada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android | Androidsis
Muddooyinka ugxantu soo baxdo, caadada iyo taranka waa wax dumar badani aaney caddeyn. In kasta oo ay gacanta ku hayaan midka ay ku sugan yihiin, haddana ma noqon karto mid sax ah, tan darteedna waxaa wanaagsan in la helo jadwal tilmaamaya in ka badan midka saxda ah ee ay ku jiraan.
Nasiib wanaagse, waxaa jira codsiyo badan oo ka socda Google Play Store oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee Android kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad ku ogaatid waxyaabaha noocaas ah si sax ah. Taasi waa sababta aan kuugu soo bandhigeyno qoraalkan uruurinta, mid aad ka heli doonto 6-da barnaamij ee jadwalka caadada ugu wanaagsan dumarka oo aad ku ogaan karto faahfaahin kala duwan sida suurta galnimada uur, kormeerka muddada iyo waxyaabo kale oo badan.
Marka xigta waxaan soo qori doonaa 6 codsi ee kalandarka caadada ee ugufiican dumarka oo aad hada kaheli karto Google Play Store ee Android. Waxaad ka heli doontaa barnaamijyo dhowr ah oo aad caan u ah iyo qiimeyn aad ku leedahay dukaanka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa xusid mudan taas dhammaantood waa bilaash, in kastoo qaarkood laga yaabo inay bixiyaan qiimo sare iyo astaamo horumarsan iyo astaamo la bixiyo.
1 Jadwalka Caadada - Taranka iyo ugxanta
2 Jadwalka caadada - ugxansidaha iyo uurka
3 Jadwalka Caadada
4 Jadwalka Caadada, Maalmaha bacriminta ugxaanta ee Flo
5 Jadwalka Jadwalka Caadada: Diidmada iyo Uurka
6 Kalandarka Caadada & Xisaabiyaha ugxanta
Jadwalka Caadada - Taranka iyo ugxanta
Waxaan ku bilaabaynaa isku soo aruurinta mid ka mid ah barnaamijyada kalandarka caadada ee soo degsada Play Store. Waana iyada oo in ka badan 100 milyan oo laga soo dejisto dukaanka Android, codsigan ayaa ku jira boqoradda qaybteeda, iyada oo ku dhowaad 6 milyan oo faallooyin iyo qiimeyn ah oo siinaya dhibcaha ugu dambeeya ee 4.9 xiddigood, kaas oo taageeraya shaqadiisa wanaagsan.
Qalabkan waxaad awoodi doontaa inaad ogaato goorta ay noqon doonto maalmahaaga soo socda ee caadada (caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn), taranka iyo ugxansidaha, kuwa uurka doonaya ama, liddi ku ah, iska ilaali midkood. Si kastaba ha noqotee, waxaa habboon in maskaxda lagu hayo in kasta oo xisaabinta iyo qiyaasaha uu sameeyay barnaamijkani ay ka mid yihiin kuwa ugu saxsan, way fiicantahay in la ogaado inay yihiin qiyaaso, si looga fogaado shilalka nooc kasta ha ahaadee. Sidoo kale, in ka badan 70 milyan oo isticmaale ayaa aaminay qiyaasaha saxda ah ee barnaamijkan. Maaha wax aan micno lahayn waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican qaybta caafimaadka.
Dhinaca kale, codsigan ayaa la socon kara qiyaasaha caafimaadka haweenka ee kala duwan sida suurtagalnimada calaamadaha uurka ee uurka, Index Mass Mass (BMI), xab iyo furitaanka xubinta taranka dumarka, iyo sidoo kale heerkulka ama jawiga, si looga caawiyo ilaalinta ladnaanta iyo caafimaadka wanaagsan. Waxay kaloo ka caawisaa xakameynta miisaanka jirka.
Haddii aadan rabin inaad lumiso xogta raadraaca wakhti kasta dhacdo kasta awgeed, waxaad abuuri kartaa keyd Google, si aad dib ugu soo celiso wakhti kasta oo aad rabto.
Developer: Naqshad Sameyn fudud Ltd.
Jadwalka caadada - ugxansidaha iyo uurka
Haysashada wareegyada caadada ee aan caadiga ahayn dhib kuma aha codsigan. Sida kuwa caadiga ah, waad xisaabin kartaa goorta caadadaas qasani ay imaan doonto si sax ah. Taa baddalkeeda, waxaad la socon kartaa wareegyada ugxan-jeexjeex bil ka bil, si aad u ogaan karto goorta ay jirto fursad uur iyo in kale.
Maalmahaa aadan ogeyn, ama adoo ilaaway, goorta caadadaada imaaneyso waa kuwii hore qalabkan. Waxa kale oo ay saadaalinaysaa maalmaha ay yihiin marka haweenku uurka u yeelan karaan.
Barnaamijkani wuxuu leeyahay interface dumar ah oo aad u fudud in la fahmo lana isticmaalo, markaa waa aalad kale oo weyn oo ka mid ah kuwa ku raaxeysata sumcad weyn ee haweenka dhexdeeda, waxtarkeeda iyo howlaheeda aadka u wanaagsan awgood. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay nuqullo nuqul ah si loo ilaaliyo xogtaada marwalba koontadaada Google (kaliya haddii aad dhaqaajiso doorashadan). Ku dar tan, hayso oo si fiican u ilaali xogtaada; iyaga la wadaagin wax dhexdhexaad ah, aad uga yar iibintooda.
Ugu dambeyntiina, codsigan jadwalka caadada ayaa leh shaqooyin kale oo badan oo ay ka mid yihiin ogaanshaha iyo la socodka uurka iyada oo loo marayo calaamadaha, xisaabinta xogta iyo cabbiraadaha sida miisaanka iyo heerkulka iyadoo la adeegsanayo garaafyo, ogeysiisyada la socoshada muddada, bacriminta iyo ugxaanta, iyo inbadan.
Developer: Kooxda Leap Fitness Fitness
Magaceedu waa mid gaar ah oo tilmaamaya shaqeynta codsigan. Kalandarkaan caadada ah waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato goorta caadada soo socota, ay xukunto ama, sida ay dad badani yiraahdaan, "Andrés" ayaa kugu dhici doona adiga. Sidoo kale, sida inta badan nooceeda ah, qalabkan, kaas oo waxay la timaadaa hawlo badan oo kala duwan, waxay bixisaa kormeer sax ah xilliga ugxamaynta waxayna xisaabisaa suurtagalnimada uur qaadista naagta, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon kuwa raadinaya uur. Iyada oo tan, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato waa maalmaha barwaaqada ah ee suurtagalnimadu ay ku jirto dhinacaaga iyo in kale.
Muuqaal kale oo ka mid ah Jadwalka Caadada waa inuu sidoo kale saadaaliyaa xilliyada aan caadiga ahayn, sidaa darteed waa in laga fogaadaa shilalka caadiga ah ee la xiriira imaanshaha caadada xilliyada aan la filayn. Waxay sidoo kale soo bandhigeysaa la socoshada miisaanka, heerkulka jirka, socodka dhiigga, astaamaha, niyadda, iyo xogta la xiriirta caafimaadka dumarka.
Codsigan sidoo kale wuxuu leeyahay widget macluumaad inaad ka heli karto shaashadda guriga ee taleefankaaga Android oo kuu oggolaanaya fiirsashada xabka ilmo-galeenka, iyo waxyaabo kale. Kuma bixinayso ogeysiisyo, digniino iyo xusuusin, waxay la imaaneysaa ilaalinta macluumaadka xasaasiga ah waxaadna sameyn kartaa nuqullo nuqul ah iyo dib u soo kabashada macluumaadka la maareeyay oo lagu keydiyey arjiga. Waa mid aad u ammaan ah, oo leh qaab aan carruurta u oggolaanayn inay arkaan waxyaabaha qaarkood.
Jadwalka Caadada, Maalmaha bacriminta ugxaanta ee Flo
Tani waxay u badan tahay inay tahay kalandarka caadada haweenka ee ugu caafimaad ahaan la aqoonsan yahay iyo codsi kormeer caafimaad ah oo ku yaal Play Store, maadaama ay ogolaansho ka heshay in ka badan 80 khuburo caafimaad, oo ay ku jiraan dhakhaatiir badan iyo hay'ado caafimaad oo caan ka ah iyo khibrad weyn. Intaa waxaa dheer, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, la soo dejiyey loona isticmaalay qaybta caafimaadka haweenka, iyada oo in ka badan 130 milyan oo soo degsasho iyo rakibid ah iyo dhibco aad u sarreeya oo 4.7 xiddig ah ay ku leeyihiin dukaanka, oo aan waxba ka jirin.
Codsigan, sida muuqata magaceeda, waxay awood u leedahay inay saadaaliso wareegyada caadada ee haweeneyda, mid joogto ah iyo mid aan caadi ahayn. Intaa waxaa sii dheer, waxay awood u leedahay inay kormeerto in ka badan 70 astaamood si loo gaaro rikoodh sax ah oo sax ah oo ku saleysan Sirdoonka Cilmiga ah ee qaababka jirka dumarka. Arrinta kale ayaa ah inay ka caawin karto ilaalinta fayoobaanta waqti kasta, iyada oo la cabbirayo jirka sida miisaanka, heerkulka, cilladda horudhaca ah (PMS) iyo libido, iyo waxyaabo kale oo gacan ka geysta helitaanka xog dheeri ah oo ku saabsan haweeneyda.
Dabcan, sida ugu fiican safkooda, Qalabkani wuxuu kaloo xisaabiyaa xilliga ugxantu soo baxda iyo fursadaha uur qaadista isagoo soo bandhigaya maalmaha bacriminta ee naagta. Waxay sidoo kale bixisaa xusuusinta muddada, ogeysiisyo iyo qaylo-dhaan iyo inbadan.
Jadwalka Jadwalka Caadada: Diidmada iyo Uurka
Barnaamij kale oo jadwalka caadada u fiican ee haweenka, gacmaha hoos. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran ee isku-duwidan, iyo in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ayaa caddeynaysa.
Wuxuu la yimaadaa shaqada saadaalinta caadada caadada ee caadiga ah iyo tan aan caadiga ahayn, marka lagu daro sidoo kale soo bandhigida cabbiraadaha socodka caadada, calaamadaha PMS (premenstrual syndrome iyo ugxan soo baxa. Waxay kaloo leedahay xasuusino iyo ogeysiisyo ku ogeysiinaya goorta caadadaada xigta ay noqon doonto, iyo waxyaabo kale. Dhamaan qaab aad u fudud.
Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u qaabeysid oo aad u habeysid xusuusinta iyo saadaalinta, sidaa darteed waxay kaa caawineysaa inaadan iloobin maalmahaas daryeelka. Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa oo aad ku ogaan kartaa maalmahaaga bacriminta leh kalandarka ugxan sidaha. Xusuus-qor ku hayso oo qor dhammaan macluumaadka arrintan ku saabsan oo la socodsii caafimaadkaaga dheddig arjigaan weyn.
Muuqaal kale oo qabow ayaa ah Waxay u oggolaaneysaa in la ogaado heerkulka aasaasiga ah si loo helo xakameyn sax ah oo sax ah xilliyada ugxamaynta iyo bacriminta, waxay ku habboon tahay kuwa doonaya inay yeeshaan ama ka fogaadaan uur. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay la socoto astaamaha uurka, dhaqdhaqaaqa ilmaha iyo waxyaabo kale oo badan, iyadoo la lafa gurayo shaqsiyan u oggolaanaya saxnaan aad u sarreeya.
Developer: Raadraaca Xilliga Tilmaamaha by BioWink
Kalandarka Caadada & Xisaabiyaha ugxanta
Si loo dhammeeyo liiskan iyo isku-dubaridka barnaamijyada kalandarka caadada ugu fiican ee haweenka, codsigan ayaa ku habboon, maadaama uu yahay mid kale oo ku raaxeysanaya bulsho badan oo adeegsadayaal ah waana mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran ee ku jira Android Play Store.
Halkaan waxaan kaheleynaa shaqooyinka jadwalka caadada caadiga ah oo ay kamid yihiin lasocodka caadooyinka caadada iyo kuwa aan caadiga aheyn oo leh saxnaan sare Waxay kaloo oggol tahay in la ogaado xilliyada ugxanshuhu iyo maalmaha bacriminta ee naagta, haddii aad rabto inaad iska ilaaliso ama uur yeelato.
Sida qalab kasta oo caafimaad oo wanaagsan haweenka iyo kalandarka caadada, Waxay leedahay ogeysiisyo, xusuusin iyo digniinno kuu sheegaya goorta maalmahaas xukunku imaanayaan, si aad u qaadatid taxaddarrada aad iska ilaalinayso shilalka. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, xusuusiyeyaasha kale ee barnaamijkani soo deyn karo waa isticmaalka kaniiniyada iyo habab ka hortag oo kala duwan.
Waxay u oggolaaneysaa in lala socdo isbeddelka uurka iyo astaamaheeda, si loo ogaado. Waxa kale oo aad ku ogaan kartaa suurtagalnimada uur iyadoo la adeegsanayo hawl si fudud loo isticmaalo.
Developer: Tijaabada xawaaraha internetka iyo mitirka Net
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6 barnaamij ee jadwalka caadada ugu wanaagsan ee Android